काठमाडौं, २४ मंसीर । पूर्वमाओवादीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर चर्चा र विवादमा आउने गरेका पूर्वएमाले नेता सूर्य थापा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार बनेका छन् । सरकारी जिम्मेवारीमा पुगेपछि पनि उनी पुनः यतिबेला विवादमा तानिएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा कास्की-२ मा विद्या भट्टराईलाई जिताउन बनेको निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक समेत रहेका राजकाजी गुरुङ पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । उनले हिजो एउटा स्टाटस लेखे, ‘हाम्रो पार्टी एकतालाई मन नपराउने दुश्मन मात्र होइन भित्र पनि यस्ता खालका तत्व छन् भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।’
सूर्य थापाले हिजो बिहानै कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘ओली-दाहाल एकत्व’ शीर्षकको विश्लेषण शेयर गरेका थिए । उनले लिंक शेयर गर्दा “..यदि प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेसँग नमिलाएको भए के हुन्थ्यो ? एमाओवादी एउटा सानो पार्टीका रूपमा खुम्चिएको हुन्थ्यो । १० वर्ष युद्ध हाँकेका प्रचण्ड सानो पार्टीका नेता हुन्थे । सम्बोधन हुन्थ्यो, पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड । …” उल्लेख गरेका थिए । त्यसैले पूर्वमाओवादीहरुलाई चित्त दुखायो ।
थापाको उक्त पोष्टमाथि पूर्वमाओवादी नेताहरुले आपत्ति जनाउन थालेपछि उनले हिजै फेरि यस्तो लेखेः
आज पूर्व वाइसिएल नेता तथा अहिलेको युवा संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्ः
युवराज चौलागाईं नेकपाका प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष हुन् । उनी पनि पूर्वमाओवादी हुन् । उनले आजै फेसबुकमा यस्तो लेखेः
यसरी पूर्वमाओवादी र सूर्य थापाबीचको टसल नयाँ भने होइन । यसअघि पनि सूर्य थापाले लेखेका कुरामा पूर्वमाओवादी नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सूर्य थापाले विगतमा पनि यसरी सामाजिक सञ्जालमा पूर्वमाओवादीहरुलाई चिढ्याउने गरेका थिएः
प्रचण्डले आफूले अहिलेसम्म कसैलाई एक लपेटो पनि नहानेको र अरुको एक लपेटो पनि नखाएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई व्यंग्य गर्दै सूर्य थापाले लेखेको स्टाटस हो यो । यसले पूर्वमाओवादीलाई चिढ्यायो । विरोध भएपछि थापाले झन् यस्तो लेखेः
प्रचण्डले केहीअघि आफूलाई फेरि जंगल जान मन लागेको बताएका थिए । त्यसमाथि पनि थापाले व्यंग्य गरेका थिएः
केहीअघि कृष्णबहादुर महराको विषयमा प्रचण्डले दाङमा पुगेर नैतिक कमजोरी भएको बताएका थिए । त्यसमा पनि थापाले यसरी खण्डन गरेका थिएः
थापाले यसअघि पार्टी एकतापछि जनयुद्ध दिवस मनाउने कि नमनाउने भन्ने विषयमा पनि यसरी लेखेका थिएः
नेकपाका नेताहरुको झगडाप्रति ट्वीटर प्रयोगकर्ता कृष्ण घिमिरेको तर्क यस्तो छ-
'ओली र प्रचण्ड आआफ्नो निहित स्वार्थको बाध्यकारी अवस्थाले गर्दा एकिकृत भए। तर दलमा ईश्वर पोख्रेल, शंकर पोख्रेल, बिष्णु द्वय, सूर्य थापा जस्ता एकता भाँड्नेहरु छन, कुन दिन यिनीहरुले प्रचण्डलाई पक्कै पछार्छन।'
पासा चिया पसलको बरिष्टे गफ सुन्या।
कुरो कसो हो कुन्नि!
— Krishna Ghimire (@kghimire1) December 10, 2019
अमेरिकामा रहेका साझा पार्टीसम्बद्ध सरगम भट्टराई भने प्रेस सल्लाहकार थापाको आलोचना गर्छन् । उनी ट्वीट सन्देशमा लेख्छन्-
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पनि बिवादमा आएको देखिन्छ। खासमा ड्रेश सल्लाहकार हुने योग्यता भएको मान्छे प्रेस सल्लाहकार भएसी हुँदैन त विवाद ! 😂😂😂😂
— Sargam Bhattarai (@sargam2020) December 10, 2019
पूर्वमाओवादीहरु भने पार्टीभित्रका यस्ता पात्रहरुका कारण पार्टी एकता कमजोर हुने बताउँछन् । के माओवादी र एमालेको एकतापछि बनेको नेकपालाई यस्ता विवादहरुले कमजोर नै बनाउला त ? कि यो केही पात्रहरुको व्यक्तिगत समस्या मात्रै हो ?
पार्टीभित्र यस्ता एजेन्डाहरुले प्रवेश नगरे नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमै ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ देखाउन रमाइरहने छन् ।